Shil geed oo dad badan ku laayay dalka Ghana | Tvsomalilandeurope
Posted on March 20, 2017 by tvsomalilandeurope.net in Uncategorized // 0 Comments
Arrintan ayaa ka dhacday Kintampo oo ah goob caan ku ah dalxiiseyaasha, dadka ay dhibaatadu soo gaartay badankooduna waxay ahaayeen arday halkaas ku dabaalanayay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah.
Waxay u muuqataa in duufaan xoogbadan ay ridday geedkan.
Afhayeenka waaxda dabdamiska ee dalka Ghana Prince Billy Anaglate ayaa sheegay in dhibkani uu ka dhacay biyodhaca Kintampo oo ku yaalla gobolka Brong-Ahafo.
Koox ka kooban booliis iyo dabdemis ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay si ay u badbaadiyaan dadka ku hoos xanibmay geedkaasi.
Qof goob jooge ah ayaa warbaahinta Starr News ee dalka Ghana u sheegay in geedku uu soo dumay markii uu billawday roob.
Ghana: “200 oo gaari” oo laga waayay madaxtooyada
Maxkamadda sare ee Gambia oo dhageysandoonta muranka doorashada
Dadka ay waxyeeladu soo gaartay badankoodu waxay ahaayeen arday ka socotay iskuulka Wenchi Senior High School, kuwa kalana waxay ahaayeen dalxiiseyaal.
Anaglate oo ah afhayeenka dabdamiska ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 18 arday ay ku dhinteen isla goobta uu shilku ka dhacay labo kalana ay ku dhinteen isbitaalka.
Wuxuu intaas ku daray in 11 ruux oo kale la dawaynayo uuna ka mid yahay qofkii safarkan masuulka uga ahaa iskuulka.
Waxaa jira warbixinno kale oo dadka dhaawaca ah gaarsiinaya 20. Kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaalka Kintampo.